လက်ဝါးတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ထားသောပါးပြင် | ဥက္ကာကိုကို
Posted by oakkarkoko on March 14, 2009
Posted in: ၀တ္ထု.	2 Comments
ရင်ထဲမှာကလိကလိဖြစ်နေလို့ရေးချကြည့်လိုက်တာပါ။ တကယ်တော့ ဒီအဖြစ်ကို ပြန်တွေးမိရင်ရှက်လွန်းလို့ မတွေးဖြစ်အောင် ကြိတ်မှိတ်
ရခိုင်ပြည်ထဲက အဝေးသင်ကျောင်းသားတွေဟာ စစ်တွေမြို့မှာ ကျောင်းသွားတက်ရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျနော်ကပထမနှစ်(ဒဿနိက)
ပါ။ စက်တင်ဘာလမှာ ကျောင်းတွေဖွင့်တော့ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းတတွေ စစ်တွေကိုရောက်သွားပြီး အဆောင်ငှားနေကြတယ်။
ကျနော်တို့အုပ်စုက ဖရက်ရှာလေးတွေဆိုပေမယ့် ဖိုင်နယ်က အစ်ကိုကြီးတွေထက်တောင် သောင်းကျန်းကြ ၊ ဗရုတ်ကျကြနဲ့။ တစ်လအတွင်း အပြတ်ကဲကြတာလေ။ ကောင်မလေးတွေဆို အစအနောက်ခံရလွန်းလို့(တကယ်တော့ပိုက်ဆံချေးလွန်းလို့)ကျနော်တို့အုပ်စုကို ဝေါင်ဝေါင်ရှေးကြတယ်။ ကျူရှင်တက်လိုက် ၊ စားသောက်ဆိုင်သွားလိုက်နဲ့ အပျော်ကြီးပျော်ကြရင်း တက္ကသိုလ်မှာ
အဓိကရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်တဲ့ အတွဲရှာခြင်းအလုပ်ကိုလည်း မလစ်ဟင်းစေရအောင် ဖုတ်ပူမီးတိုက်ဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့။
ကျနော်တို့အုပ်စုက ကျော်နိုင်နဲ့ ချမ်းမြေ့တို့ဆို အတွဲကိုယ်စီရကုန်ကြပြီ။ ကျနော့်မှာသာ ယောင်နနနဲ့ကျန်ခဲ့တာ။ ကျောင်း(၁၀)ရက်က
စတက်နေရပြီ။ ဒီလိုနဲ့ …ကျွန်တော်လည်း ကောင်မလေးတွေ၊ မမတွေကို သတိထားစောင့်ကြည့်ပြီး ဖူးစာရှင်ကို အူယားဖားယား ရှာ ဖွေနေရင်းက …….။
သူ့နာမည်က “မိုးဖြူခိုင်”တဲ့။ မြန်မာစာ ပထမနှစ်က။ သိတယ်မို့လား။ ကျနော်ကြိုက်ပြီဆိုမှတော့ လှပြီပေါ့ဗျာ။ တစ်ကယ်ပဲ ကောင်မလေးက
တော်တော်လှပါတယ်။ သူ့အချိုးအဆစ်နဲ့သူ ပြောစရာကိုမလိုပါဘူး။ (ဟီး…ဂလု)။ ပြီးတော့ရယ်လိုက်ရင် ပါးချိုင့်လေးနှစ်ဖက်က ခွက်..ခွက်
၀င်သွားတာ။ ကျနော်ရင်ခုန်တာမှ ဘာပြောကောင်းမလဲ။
ကျနော်လား…။ ဟင့်အင်း…ပေါ်တင်ကြီးစကားလိုက်ပြောဖို့ သတ္တိမရှိပါဘူးဗျာ။ အထင်မကြီးကြပါနဲ့။ ကျနော်တတ်တာက ရှေးခေတ်နည်း
တွေဖြစ်တဲ့ လျှောက်ပြန်သံပေး ၊ ခြေအေးဝမ်းယောင် အလုပ်။ သူလေးသတိပြုမိအောင် အတန်းရှေ့ယောင်လည်လည်နဲ့သွားလိုက်။ သူမကို ခိုးကြည့်လိုက်နဲ့။ သတ္တိက ဒီလိုနေရာမျိုးဆို ငုပ်နေတော့တာ။ (တကယ်တော့ ဘယ်နေရာမှာလဲ အဲဒီသတ္တိက ထွက်လာတာ မရှိခဲ့ပါဘူး)။ အဲသလိုကောင်ပါဆိုမှ …။
ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ ။ ။ ကျောင်းလည်းပိတ်၊ ကျူရှင်လည်းပိတ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တတွေ အိပ်ရာက နောက်ကျမှထကြပါတယ်။ ထမင်း သွားစားတော့ 11 နာရီခွဲနေပြီ။ ထမင်းကဆိုင်မှာ လပေးနဲ့ စားရတာလေ။ “ရွှေသံတွဲ” မှာ ထမင်းစားပြီးတော့ ဈေးကိုသွားဖို့စိတ်ကူး ပေါ်တာနဲ့ ကျွန်တော်ရယ်၊ ကျော်နိုင်ရယ်၊ ချမ်းမြေ့ရယ် သုံးယောက်သား ဈေးဘက်လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။
ဈေးရောက်တော့ ၀ယ်စရာလည်း များများစားစားမရှိပါဘူး။ နို့ဆီဗူးနှစ်ဗူးရယ်။ ကော်ဖီမစ်တစ်ထုတ်ရယ်ပဲဝယ်ပြီး ဈေးကိုပတ်ကြတယ်။ အထည်ဆိုင်နားရောက်တော့ ဟိုနှစ်ကောင်က “ဟေ့ကောင်ဥက္ကာ၊ ငါ့တို့ဘောင်းဘီကြည့်ဦးမယ် မင်းဒါတွေခဏကိုင်ထား” ဆိုပြီး နို့ဆီဗူး နှစ်ဗူးကိုလက်ထဲထိုးထည့်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အိတ်မပါတဲ့ နို့ဆီဗူးနှစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ
ဟုတ်တာပေါ့။ ကျွန်တော်ရဲ့ ပါးချိုင့်လေး မိုးဖြူခိုင်ပဲ။ သူလည်းဈေးဝယ်ဖို့လာတယ်ထင်ရဲ့။ နောက်ကောင်မလေး လေးယောက်နဲ့။ ကျွန်တော်လည်းစဉ်စားမနေတော့ပဲ နို့ဆီဗူးနှစ်လုံးကိုင်ပြီး သူတို့နောက်ကို အပြေးတစ်ပိုင်းလိုက်လာခဲ့တယ်။ သူ့ဘေးနားက ဖက်တီးမ မိုးမိုးက ကျွန်တော်ကိုလှမ်းမြင်သွားပြီး မိုးဖြူခိုင်ကို အသာလက်ကုတ်ပြောတယ်။
“ဟဲ့ ..ဟိုမှာ မျက်နှာရူးကောင်လိုက်လာတယ်” တဲ့။
အားလုံးက လှည့်ကြည့်ကြတော့ ကျွန်တော်လည်း နို့ဆီဗူးလေးနှစ်လုံးကို လက်နဲ့ဆုပ်ပြီး သွားကိုပြဲခနဲဖြဲပြရတာပေါ့။ ဒါကိုပဲ ငတိမလေး တွေက မျက်နှာရှုံမဲ့ပစ်လိုက်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့နောက်တစ်ပေလောက်အကွာမှာ တောက်တဲ့ ကပ်သလို ကပ်လို့။ မိုးဖြူခိုင်က ပြန်လှည့်ကြည့်ရင် သွားကိုဖြဲပြလိုက်။ နို့ဆီဗူးနှစ်လုံးကို ညှစ်ပြလိုက်နဲ့ အလုပ်ကို ရှုပ်လို့။
ရှက်ရှက်နဲ့ဝန်ခံရရင် ကျွန်တော့်မျက်လုံးဟာ မိုးဖြူခိုင်ရဲ့ ထမီစကတ်အကွဲကြားက ခြေသလုံးဖြူဖြူလေးဆီမှာပါ။ ခြေသလုံးသားလေးတွေ ၀င်းခနဲ ..၀င်းခနဲ့ပေါ်လာတိုင်း ကျွန်တော့်မှာ ဖီလင်တွေဆောင့်ဆောင်တတ်လို့။ ခုထိမတိုးတက်သေးတဲ့ ကိုယ့်အခြေအနေကိုလည်း ဒေါသ ထွက်လာတယ် ဒီတစ်ခါတော့ ပြောလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီး မိုးဖြူခိုင်အနားကို ခြေလှမ်းသွက်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ …
ဖြစ်ချင်တော့ ရုတ်တရက်ကျွန်တော့်လက်ထဲက နို့ဆီဗူးတစ်လုံးဗြုန်းဆိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ ထပ်ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော်က အဲဒီနို့ဆီဗူးကို တက်နင်းမိပြီး ပက်လက်လန်ချော်လဲကျတယ်။ ပိုပြီးဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီလို နောက်ပြန်ချော်လဲကျတာ ခြေထောက်က နို့ဆီဗူးနဲ့လျှောပါသွား လို့ ရှေ့ကသွားနေတဲ့ မိုးဖြူခိုင်ရဲ့ဖင်ကို ဆောင့်ကန်သလိုဖြစ်သွားပြီ …….
“ဟဲ့ ဟဲ့ လုပ်ကြပါဦး”
အဖြစ်အပျက်က စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်ပါ။ ရင်ခုန်ခြင်းကနေ ကံဆိုးခြင်းဘက်ကို ကူးပြောင်းသွားပုံဟာ မြန်ဆန်လွန်းနေရဲ့ …။
နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အပျက်ကတော့ မိုးဖြူခိုင်က မုန်းတီး၊ နာကျည်း၊ မီးဝင်းဝင်းတောက်တဲ့ မျက်လုံးအစုံနဲ့ ကျွဲကြည့်ကြည့်ပြီး ဈေးလယ်ကောင်မှာ ကျွန်တော့်ပါးကို ကင်ပေတိုင်လက်သံနဲ့ ဘယ်ပြန်ညာပြန်တွယ်တော့တာပဲ။
“ဖြန်း …ဖြန်း …ဖြန်း …ဖြန်း…ဖြန်း…….ဖြန်း……..ဖြန်းးးးးး ဖြန့်…”
သြော်…..မောင်ဥက္ကာတို့ လွဲချော်တတ်ပုံများပြောပါတယ်။ ။
“ဟဒယ”ဟာသမဂ္ဂဇင်း ၊ ဇူလိုင်လ ၊ 2006။့
2 comments on “လက်ဝါးတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ထားသောပါးပြင်”
မဗေဒါ (၈၈) on June 13, 2010 at 2:14 pm said:
စာဟောင်းမြည်းကြည့်မှပဲ စာရေးဆရာကြီးဆိုတာ သိသွားပါတယ်..။
မရိုးတဲ့ ဇာတ်လမ်းပေမဲ့ ဖတ်ကောင်း၏..။
misssuleiwin on March 14, 2009 at 12:54 pm said:
ခွစ်…. နည်းတောင်နည်းသေးတယ်…. လျှပ်တီးလျှပ်ပြာ နဲ့…..း)